दिल्लीबाट उपाधि जित्ने लक्ष्य छ: सन्दीप लामिछाने(अन्तर्वार्ता) - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नेपाली ग्लोबल टि–२० स्टार सन्दीप लामिछाने इण्डियन प्रिमियर लिग(आइपिएल) खेल्न बुधबार बिहान दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्।
अघिल्लो वर्ष दिल्ली डेयरडेभिल्स(हाल दिल्ली क्यापिटल)बाट आइपिएल खेल्दै सन्दीप अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइजी क्रिकेट खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका थिए। दिल्लीबाट अन्तिम ३ खेल खेल्न पाएका सन्दीपले ५ विकेट लिदैँ सनसनी मच्चाएका थिए। त्यसपछि सन्दीपले विश्वभरका सातवटा विभिन्न फ्रेन्चाइजी लिग खेले।
दिल्लीका लागि १२औं संस्करण खेल्न जानुअघि मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकनी गर्दै सन्दीपले यसपटक दिल्लीमा पाएको अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्ने बताए। साथै उनले आफूले अतिरिक्त खेलाडीका रुपमा पानी बोकेपनि टिमले जितोस् भन्ने चाहना रहेको बताए।
दोस्रो वर्ष आइपिएल खेल्न जादा कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ?
उत्साह त हरेक चोटी हुन्छ। पहिलो आइपिएल खेल्न जादा म बढी उत्साहित थिए। त्यसबेला पाएका मौकाहरुमा आफूलाई प्रमाणित गर्न पाए। यसबेला जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यसपछि थुप्रै प्रतियोगिताहरु खेल्न पाए। सबैमा प्रदर्शन राम्रो हुदैँ गयो। यसपटक पनि उत्साहित छु। जित र हार त गेममा भइरहन्छ। मैले आफूले सक्दो वेस्ट दिने प्रयास गर्छु। चाहे त्यो नेपालको टिमबाट खेलेको होस् या विभिन्न फ्रेन्चाइजी टिमहरुसँग। अहिलेसम्मका सबै अनुभवहरु बटुलेर भोलि दिल्ली जादैँछु। र आशा गर्छु यो सिजनमा राम्रो हुनेछ।
एकवर्षअघि नेपालको स्टार खेलाडीका रुपमा आइपिएल खेल्नु भएको थियो। यसपटक ग्लोबर स्टारका रुपमा खेलिरहँदा अझै राम्रो प्रदर्शन गर्ने दबाब होला नि?
म कहिलै दबाब लिदैँन। यति लामो समय क्रिकेट खेलिसकेका छौं। ठूला लिगहरु खेल्दा चाही तपाईका बारेमा धेरै मान्छेहरुलाई थाहा हुन्छ। धेरै प्लेयरहरुले हजुरलाई नियालेको हुन्छ। मलाई एउटा अवसर के कुरामा छ मलाई बुझिसकेका विरुद्ध पनि रणनीती बनाउँदै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकुँ। त्यसैअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु।
यस सिजनको दिल्लीको टिम कस्तो पाउँनुभएको छ?
नयाँ नाम छ, दिल्ली क्यापिटल। सबैकुराहरु नयाँ ल्याएर आउछ जस्तो लाग्छ। गतवर्ष भन्दा यसवर्ष ब्यालेन्स टिम छ। ११ देखि १५ सम्मै ब्याट्सम्यान र बलरहरु छन्। कुनैपनि खेलाडीले चान्स पाउँन सक्छ। कुनैपनि खेलाडीहरु जहाँपनि एडजस हुन सक्छन्। ब्याटिङक्रम यस्तो छ कि जुन अर्डरमा पनि जुन प्लेयर फिट हुन्छ। अभ्यास शत्र हेर्दापनि यसपटक टिमले राम्रो गर्छ झै लागेको छ।
अघिल्लोपटक टिममा पर्न पनि संघर्ष गर्नुपरेको थियो। यसपटक दिल्लीको टोलीमा सन्दीपको व्यक्तिगत लक्ष्य के हुनेछ?
टिमलाई जिताउने मेरो व्यक्तिगत लक्ष्य हुनेछ। विगत ११ सिजनमै दिल्लीको सोचेको जस्तो राम्रो भएको छैन्। यस सिजनमा आफूलाई त्यहाँ(उपाधि)सम्म पुर्याउन सके भने मलाई लाग्छ त्यो मेरो र टिमका लागि पनि राम्रो हुनेछ। आशा गर्छु त्यो सबैकुराहरु मिलोस र भनेको जस्तो उपाधि हात लागोस्।
दिल्लीमा यसपटक सुरुवाती एघारको सम्भावना के देख्नुहुन्छ?
मैले कहिले सोच्दिन कि मैले खेल्न पाउँछु या मैले खेल्न पाउँदैन भनेर। म जहिले पनि अवसरको खोजीमा हुन्छु। यदि अवसर पाइयो भने त्यो अवसर तपाईले सदुपयोग गर्नुभयो भने त्यो सबैजनालाई उत्कृष्ट जवाफ हुन्छ। मेरो लागि चाहीँ खेल्न पाएपनि नपाएपनि, पानी बोकँे पनि टिमले जितोस्, राम्रो गरोस् भन्ने चाहाना हुन्छ। किनभने सबै खेलाडीहरु टिमलाई जिताउँनका लागि नै खेल्छ। हाम्रो नेपाली टिममा पनि कहिलेकाही राम्रो खेलाडीहरु पनि बेन्चमा बस्नुपर्छ। तर हामी सबैको एउटा धारणा हुन्छ कि टिमले जितोस् र त्यही धारणा बोकेर हामी अगाडी बढेका हुन्छौं।
फ्रेन्चाइजी लिगहरु धेरै खेल्दा उपाधि हात पार्न सक्नुभएको छैन्, यसपटक उपाधि जित्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ त?
आशा गर्छु यसपटक उपाधि हात लागोस्। किनभने प्लेयरहरुले राम्रो इफोर्ट लगाएकै हुन्छ। कतिपयबेला अनलक्की भइन्छ। टिम हारेको हार्यौ गर्छ। त्यसपछि पनि आफ्नो प्रदर्शन पनि राम्रो हुनुपर्यो। फ्रेन्चाइजी लिगमा म जादैँछु, मैले नयाँ कुरा सिके भने अन्त्यमा मैले मेरो देशका लागि पनि राम्रो हुन्छ। हामीले नेपाललाई पनि अर्को लेभलमा पुर्याउँनु छ।
बलिङसँगै ब्याटिङमा पनि सुधार गर्दै ल्याउँनु भएको हो?
विस्तारै इम्प्रुभ गर्दैछु। अन्य ब्याट्सम्यानलाई हेर्दापनि धेरै कुरा सिकिन्छ। अनि पाएको बेला म नेट्समा पनि अभ्यास गर्छु। जसरी हुन्छ, म टिमलाई योगदान दिउँ भन्ने लाग्छ। तीनवटै डिपार्टमेन्टमा राम्रो गरे अन्त्यमा टिम नै विजेता बन्ने हो।
बीगबास भन्दा पाकिस्तानी प्रिमियर लिगमा तपाईको प्रदर्शन प्रभावशाली देखिएन् नी?
पीएसएल खेल्दा खेरि इन्जुरी भएको थियो। हेल्थ बिग्रेको थियो। कराँचीविरुद्ध खेल्दा पेटमा समस्या हुनुका साथै ज्वरो पनि आएको थियो। चारपाँच दिन हेल्थ खराब भएपनि म खेल्न खोजिरहेको थिए। त्यसपछि पाकिस्तानमा गएर खेल्दा सानो बाउन्ड्री थियो। हरेक दिन ठूला सटहरु लागिरहेका थिए। तर, पनि जसरी हुन्छ टिमलाई योगदान दिन प्रयास गरिरहेको थिए। कराँचीविरुद्ध मैले लगातार चार ओभर फालेर आफू मैदानबाट बाहिर गएको थिए। अब मैदान सानो छ भनेर मात्रै हुदैँन त्यो कुरामा आफूलाई एडजस गर्दै कसरी रन रोक्न सक्छ भन्नेमा योजना बनाउँनुपर्छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रका ब्याट्सम्यानहरु अन्यको तुलनामा तपाईको बलमा राम्रो खेल्छन् भन्ने पनि हो?
मलाई त्यस्तो लाग्दैछ। अस्ट्रेलियामा जादा पनि यदि कुनैमान्छे तपाईलाई पहिलो चोटी खेलिरहेको छ भने उसलाई असजिलो महशुस हुन्छ। अस्ट्रेलियन कण्डिसनमा सुरुमा खेल्न जादाँ म एकदम माथि नै थिए। विस्तारै खेल्दै जादा उनीहरुले पनि मलाई बुझेर खेल्दै गए। पीएसएलमा आउँदा पनि सुरुमा राम्रै भयो। विस्तारै सबै खेलाडीहरुले बुझेर खेल्न थाले जस्तो लाग्छ। टिमहरुमा हामीले नयाँ भेरिएशन प्रयोग गर्न सक्छौ कि भन्ने तर्फ जोड दिइरहनुपर्ने पनि रहेछ।
प्रकाशित ५ चैत २०७५, मंगलबार | 2019-03-19 15:30:14